Magacyo cusub oo ku jira liiska basaasnimo ee pegasus. Yey yihiin? - WalWaal Online News and Information about Somalia
Home Wararka Magacyo cusub oo ku jira liiska basaasnimo ee pegasus. Yey yihiin?
Magacyo cusub oo ku jira liiska basaasnimo ee pegasus. Yey yihiin?
Wargaysaka washington Post ayaa daabacay magacyo cusub oo ka mid ah liiska lagu basaasay barnaamijka israaiil ee Pegasus, waxayna isugu jiraan madaxda hadda talada haysa iyo kuwo hore waxaana ka mid ah madaxweyne Macron iyo kan Ciraaq Barham Saleh.
Sida wargeysku qoray, saddex madaxweyne oo hadda talada haya oo kala ah Emmanuel Macron oo Faransiis ah, Ciraaqi Barham Saleh iyo Koonfur Afrika Cyril Ramaphosa, iyo hal boqor, oo ah Boqorka Marooko Maxamed VI ayaa ku jira liiska.
Liiska waxaa kale oo ku jira seddex madax dowladeed oo hadda talinayaa: Raiisel Wasaaraha Pakistan Imran Khan, Masar Mustafa Madbouli, Marooko Sacad eddin Al-Othmani iyo 7 madax hore dowlado ka ahaa ayaa iyagana lagu bartilmaameedsaday basaasnimadan, intii ay xafiisyadooda joogeen, oo ay kujiraan kii Lubnaan Saad Hariri iyo kii Beljim Charles Michel.
Wargeyska Faransiiska ee Le Monde ayaa sheegay Talaadadii in taleefanka Macron iyo ra’iisul wasaarihii hore Edouard Philippe lagu basaasay barnaamijka Israel ee Pegasus ayna ku basaaseen “sirdoonka Marooko.”
“Tani waxay dhacday sanadkii 2019,” ayaa lagu yiri wargayska, ka sokoow basaasida 14 wasiir oo ka tirsan dowlada faransiiska, wali lama hubo in sirdoonka morocco uu ku guuleystay basaasida taleefanka madaxweynaha iyo xubnaha kale ee dowlada, iyo inkale. “
Xaqiiqooyinka la kashifay “waxay noqon doonaan kuwo aad u culus haddii la caddeeyo,” ayuu u sheegay Le Monde.
Idaacadda Faransiiska ayaa shalay baahisay in Boqorka Marooko Maxamed VI iyo xulafadiisu ay ka mid yihiin shaqsiyaadka ku jira liisaska sirdoonka Marooko, ee lagu bartilmaameedsaday barnaamijka Pegasus, iyadoo si faahfaahsan loola socdo saameynta weyn iyo xadka basaasnimadu gaadhsiisantahay ee la xiriira kiiska.
Magaalada Paris, dacwad oogayaashu waxay ku dhawaaqeen baaritaan lagu sameeyo warbixinada warbaahinta ee ku saabsan basaasida suxufiyiinta faransiiska ee taleefanadooda lagu jabsaday pegasus ee ay fulisay dowlada Morocco, dawlada marooko se way diiday.
Wargeyska Faransiiska ee Le Monde ayaa Isniintii sheegay in Dhaxalsugaha Boqortooyada Sacuudi Carabiya Mohammed bin Salman iyo ka Abu Dhabi Prince Mohammed bin Zayed ay sameeyeen basaasnimo iyagoo u maraya Barnaamijka “Pegasus” ee shirkadda Israel “NSO”, basaasnimadaa oo lagu bartilmaansaday siyaasiyiinta Lubnaan iyo warbaahinta lubnaan.
Waddanka Hindiya, xisbiyada mucaaradku waxay carqaladeeyeen baarlamanka waxayna dalbadeen in baadhitaan lagu sameeyo wararka sheegaya in Dowladdu u adeegsatay habab baasnimo, saxafiyiinta iyo siyaasiyiinta, oo uu ku jiro hogaamiyaha mucaaradka.
Xubnaha mucaaradka ayaa ku dhawaaqayay halku dhigyo ka dhan ah xukuumada raiisul wasaare Narendra Modi, iyagoo sheegay inay doonayaan baaritaan madax banaan oo ku aadan cabashooyinka basaasnimada iyo iscasilaada wasiirka arimaha gudaha Amit Shah.
Barnaamijka Pegasus, oo ay soo saartay shirkad gaar loo leeyahay oo si toos ah ula shaqeysa dowladda Israa’iil, ayaa gacan ka geysata basaasidda taleefannada casriga ah iyadoo la jabsanayo laguna sii dhexdaynayo fayras u oggolaanaya in la daawado sawirrada, sheekaysiga iyo dukumiintiyada ku dhex jira taleefanka.
Warbixin lagu daabacay New York Times Sabtidii ayaa shaaca ka qaaday in Israel ay si qarsoodi ah u ogolaatay koox ka mid ah shirkadaha ilaalada elektarooniga ah inay u shaqeeyaan Dowlada Sacuudiga.
shirkadda NSO oo Israel laga leeyahay waa shirkada horumarisa barnaamijka Pegasus. Shirkadan waxaa aasaasey dad horey uga soo shaqeeyey Unugga 8200, oo ka mid ah hubka sirdoonka Israel ugu awooda badan, shaqadiisuna waxay ku wajahan tahay basaasida hay’adaha iyo shaqsiyaadka aduunka.
Xigasho: Warbaahinta Mareykanka
Previous articleHorumaro cusub oo ay gaadheen ciidamada Yemen iyo dagaalyahanada taageera ee ku sugan Al-Bayda
Next articleWhy is Ibn Salman and Israel spying on Ghassan bin Jeddo?
Maraykanku wuxuu dib u furi doonaa socotada caalamka ee haysta shahaadada tallaalka